အကွိမျကွိမျနားလညျပေးခဲ့ဖူးပါတယျ … – Shinyoon
ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှအေကွောငျးကိုပွောပွီဆိုတာနဲ့ အနောကျမှာ နားလညျမှုလေးတှဆေိုတာကလဲ ကပျပါခဲ့တာပါပဲလေ … နားလညျမှု သူကကိုယျမှမဟုတျတာဆိုတဲ့စိတျနဲ့ အမှားတှလေုပျတဲ့အခါတောငျ ခဈြတဲ့စိတျတဈခုတညျးနဲ့ နားလညျပေးခဲ့ဖူးတယျ
နားလညျမှုမရှိတဲ့အခဈြက ပူလောငျရတတျတယျ ကြှနျမသူ့ကိုခဈြခဲ့တာဟာ အတူတူ ပြျောဖို့လေ မယုံသင်ျကာတှနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလဲ မပူလောငျခငျြခဲ့သလို သူ့ကိုလဲ အနမေခကျစခေငျြခဲ့ဘူး ။ ဒါက ကြှနျမဘကျက တှေးခဲ့ ဆငျခွငျခဲ့တာတှပေါ ။
စပွီးခဈြခဲ့တုနျးကတော့ မကွိုကျတဲ့အရာတှေ နောကျမလုပျတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ မုသားနဲ့ရောထားတဲ့ကတိတှေ ပေးခဲ့ဖူးတယျ ဒါကိုလဲ ယုံတာပဲလားတဲ့ ယုံကွညျခငျြခဲ့ဖူးတာပါ ဘယျသူဘာပွောပွော ကိုယျက သူ့ကို ယုံကွညျပေးခဲ့မိတာပါ ။ အစဈအမှနျမဟုတျတဲ့အရာတှဟော ရရှေညျမခံခဲ့ပါဘူလေ .
ပထမတဈခါ … ကိုယျမကွိုကျဘူးဆိုတဲ့အရာတှေ လုပျခဲ့တုနျးက နောကျဆိုရငျတော့ မလုပျပါနဲ့လားဆိုပွီးတော့ ကြှနျမ မကျြရညျတှနေဲ့တားတယျ ။ ပွီးရငျ သူပွနျလာမှာဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ဆကျပွီးနားလညျဖို့ကွိုးစားတယျ ဒါပမေယျ့ အကွိမျကွိမျအခါခါ ဖွဈလာတဲ့အခါ နားလညျပေးနရေတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မေးခှနျးတှေ မေးနမေိတယျ
ငါပဲ နားလညျပေးခဲ့လှနျးလို့သူ ကိုယျ့စတေနာတှကေို မမွငျတော့တာလားဆိုတာမြိုးပေါ့ . တဈနကေ့ရြငျတော့ဆိုပွီး မြှျောလငျ့နရေတာတှဟော တဖွေးဖွေး ဝေဝါးလာသလို ဘာအတှကျဆကျပွီး နားလညျပေးရမလဲ ကြှနျမမတှေးတတျဘူး အကွိမျကွိမျ ကြှနျမ နားလညျပေးခဲ့မိပါတယျ ။ ဒါကပဲ သူဘာလုပျလုပျ ရပါတယျဆိုတဲ့ အတှေးတှေ ဝငျသှားစတောဖွဈမယျ ။
သူ့အကငျြ့တှေ ကိုယျမကွိုကျတာတှတေော့ ဘယျတော့မှ ပွငျလာမှာမဟုတျတော့ဘူး ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအကြောင်းကိုပြောပြီဆိုတာနဲ့ အနောက်မှာ နားလည်မှုလေးတွေဆိုတာကလဲ ကပ်ပါခဲ့တာပါပဲလေ … နားလည်မှု သူကကိုယ်မှမဟုတ်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အမှားတွေလုပ်တဲ့အခါတောင် ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ နားလည်ပေးခဲ့ဖူးတယ်
နားလည်မှုမရှိတဲ့အချစ်က ပူလောင်ရတတ်တယ် ကျွန်မသူ့ကိုချစ်ခဲ့တာဟာ အတူတူ ပျော်ဖို့လေ မယုံသင်္ကာတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ မပူလောင်ချင်ခဲ့သလို သူ့ ကိုလဲ အနေမခက်စေချင်ခဲ့ဘူး ။ ဒါက ကျွန်မဘက်က တွေးခဲ့ ဆင်ခြင်ခဲ့တာတွေပါ ။
စပြီးချစ်ခဲ့တုန်းကတော့ မကြိုက်တဲ့အရာတွေ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ မုသားနဲ့ရောထားတဲ့ကတိတွေ ပေးခဲ့ဖူးတယ် ဒါကိုလဲ ယုံတာပဲလားတဲ့ ယုံကြည်ချင်ခဲ့ဖူးတာပါ ဘယ်သူဘာပြောပြော ကိုယ်က သူ့ကို ယုံကြည်ပေးခဲ့မိတာပါ ။ အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေဟာ ရေရှည်မခံခဲ့ပါဘူလေ .
ပထမတစ်ခါ … ကိုယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေ လုပ်ခဲ့တုန်းက နောက်ဆိုရင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့လားဆိုပြီးတော့ ကျွန်မ မျက်ရည်တွေနဲ့တားတယ် ။ ပြီးရင် သူပြန်လာမှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဆက်ပြီးနားလည်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ဒါပေမယ့် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဖြစ်လာတဲ့အခါ နားလည်ပေးနေရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းတွေ မေးနေမိတယ်
ငါပဲ နားလည်ပေးခဲ့လွန်းလို့ သူ ကိုယ့်စေတနာတွေကို မမြင်တော့တာလားဆိုတာမျိုးပေါ့ . တစ်နေ့ကျရင်တော့ဆိုပြီး မျှော်လင့်နေရတာတွေဟာ တဖြေးဖြေးေ၀၀ါးလာသလို ဘာအတွက်ဆက်ပြီး နားလည်ပေးရမလဲ ကျွန်မမတွေးတတ်ဘူး အကြိမ်ကြိမ် ကျွန်မ နားလည်ပေးခဲ့မိပါတယ် ။ ဒါကပဲ သူဘာလုပ်လုပ် ရပါတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ၀င်သွားစေတာဖြစ်မယ် ။
သူ့ အကျင့်တွေ ကိုယ်မကြိုက်တာတွေတော့ ဘယ်တော့မှ ပြင်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး ။
မိနျးကလေးတဈယောကျ ဘယျလောကျနာကငျြပွီးမှ လကျလှတျဖို့ကို တှေးလဲ ….